Codkaaga Ha Lumin | Martech Zone
Axad, Febraayo 10, 2013 Axad, Maarso 24, 2013 Douglas Karr
Waxaan ka helay jawaab celin dhowr qof oo dad ah in qoraalladeennii ugu dambeeyay ay ahaayeen qalalan. Kaagama doodi doono taas - waxaan ku mashquulsaneyn baaris aad u qoto dheer oo ku saabsan qalabka iyo astaamaha goor dambe. Waxay umuuqataa in sida qotada dheer ee aan u sameeyno baaritaankayaga, ay ka adagtahay in la qoro qoraal kooban oo sameeya cadaalada laakiin wali hubinaysa in codkaaga la maqlo.
Saaxiibkaan saaxiibkey waa aqriste baloog, waxna wuu ku qoraa sidoo kale, marka waan dhageysanayaa oo waxaan sameynayaa isbadalo. Qoraal kasta, waxaan ku dari doonaa midab dheeri ah wadahadalka adiga. Martech Zone waxay qaadataa aragti aad u wanaagsan oo ku saabsan sida tikniyoolajiyaddu u caawin karto suuqleyda. Waxyaabaha la yaabka leh ayaa ah inaanan rajo ka qabin. Waxaan dareemayaa sidii aagga qalabka naga caawiya inuu yahay mid ballaaran oo dhuuban - oo leh fursado badan oo badan oo loogu talagalay nidaamyada suuqgeynta kanaalka ee naga caawiya inaan soo uruurinno, cabirno oo aan hagaajino xiriirkeenna rajada iyo macaamiisha.
Waxaan sidoo kale ka fikiraynaa inaan codad dheeri ah ku darno Martech Zone. Waxaan u maleynayaa inay jirto fursad lagu daro suuqgeyn weyn ama maskax farsamo oo laga yaabo inay ku dhowdahay xarumaha waaweyn ee suuqgeynta ee New York, Boston, ama San Francisco. Haddii aad tahay qoraa teknoloji… qaasatan mid dareen qosol leh, waxaan jeclaan lahayn inaan kula hadalno. Raadintayadu illaa iyo hadda ma aysan keenin wax badan oo hoggaamin ah.
Ku noqo wadada…
Mawduucu ma aha in la qoro oo kaliya in la qoro nuxurka. Waxaad ogaan kartaa in waxyaabahayagu ay qulqulayaan oo socdaan. Qaarkood waxay ku xiran yihiin culeyskayaga shaqo, laakiin inta badan maahan, waa arrin annaga oo aan haysan wax muhiim ah oo aan dhahno. Waxaan dooneynaa qoraal kasta oo baloog ah inuu caawiyo suuqleyda. Qoraal kasta.
Sidoo kale, waxaan ku balaarinay codkeena barnaamijkeena, barnaamijka emaylka iyo fiidiyowyada. Waxaan ku biirnay kooxo Edge-ka Webka Raadiyaha si loo soo saaro barnaamij raadiyareed xirfad leh (oo gudaha laga sii daayo) oo ay weheliso fiidiyow aad u fiican. Hubso inaad la socoto - waxaad nagala soo gali kartaa annaga App app, iTunes, Stitcher iyo Youtube.
Ma hubo cidda qalinka ku duugay ereyga "baraha bulshada", laakiin waxay ahaayeen kuwo xariif ah. Mawduucu waa warbaahin… laakiin waxyaabaha aan cod lahayn ma aha mid bulsho, waa uun warbaahinta. Ha lumin codkaaga. Ka dhig mid bulsho.
Tags: Suuqgeynta Suuqgeyntashakhsiyaddastylecodka
Runtii miyaad ku jirtaa 1% ee LinkedIn?